“Ha Chọrọ Ka M Jiri Aka M Chọpụta nke Bụ́ Eziokwu” | Baịbụl Na-agbanwe Ndụ Ndị Mmadụ
Ụlọ Nche | Febụwarị 2013
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Alur American Sign Language Amharic Angolan Sign Language Arabic Arabic (Lebanon) Argentinean Sign Language Armenian Armenian (West) Azerbaijani Batak (Toba) Bicol Bislama Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chavacano Chichewa Chilean Sign Language Chin (Hakha) Chinese (Shanghainese) Chinese (Sichuanese) Chinese (Yunnanese) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Cibemba Colombian Sign Language Croatian Czech Czech Sign Language Dangme Danish Dutch Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French French Sign Language Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Italian Sign Language Japanese Japanese Sign Language Kabuverdianu Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Korean Kwangali Latvian Lingala Lithuanian Low German Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Maya Mexican Sign Language Mizo Mongolian Moore Myanmar Nepali Ngabere Norwegian Nzema Oromo Ossetian Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Peruvian Sign Language Polish Polish Sign Language Portuguese Portuguese (European) Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Romany (Vlax, Russia) Runyankore Russian Russian Sign Language Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Sunda Swahili Swedish Tagalog Tahitian Talian Tatar Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Totonac Tshiluba Tsonga Turkish Twi Tzeltal Ukrainian Urdu Uruund Valencian Vietnamese Waray-Waray Welsh Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Lachiguiri) Zulu
“Ha Chọrọ Ka M Jiri Aka M Chọpụta nke Bụ́ Eziokwu”
Akụkọ Luis Alifonso kọrọ
A MỤRỤ M N’AFỌ: 1982
ABỤ M ONYE: DỌMINIKAN RIPỌBLIK
NDỤ M BIRI: EZINỤLỌ ANYỊ NA-EKPE CHỌỌCHỊ MỌMỌN
A mụrụ m n’obodo a na-akpọ Santo Domingo nke dị na Dọminikan Ripọblik. Abụ m nwa nke anọ n’ime ụmụ anọ nne na nna m mụrụ. Nne na nna anyị gụrụ oké akwụkwọ, ha chọkwara ịnọ n’obodo a na-enwechaghị ndị ọjọọ na ya zụọ anyị. Afọ anọ tupu a mụọ m, papa m na mama m hụrụ ụmụ okorobịa ndị na-ekpe chọọchị Mọmọn. Ha si n’obodo ọzọ bịa ikwusa ozi ọma n’obodo anyị. Mgbe mama m na papa m hụrụ otú ha si akpa ezigbo àgwà ma na-eji ejiji dị mma, ha kpebiri ka ezinụlọ anyị kpewezie okpukpe ndị Mọmọn. Ọ bụ otú ahụ ka ezinụlọ anyị si soro ná ndị mbụ bidoro ikpe chọọchị Mọmọn n’obodo anyị.
Mgbe m na-eto, oriri na ọṅụṅụ a na-eme n’ụlọ ụka anyị na-atọ m ezigbo ụtọ. Ihe ọzọ na-amasịkwa m bụ na ndị chọọchị Mọmọn ejighị okwu gbasara ezinụlọ na mmadụ ịkpa àgwà ọma egwuri egwu. Obi na-atọ m ụtọ na m bụ onye Mọmọn. M kpebikwara na m ga-abụ onye Mọmọn na-ekwusa ozi ọma n’ala ọzọ ma m too.
Mgbe m dị afọ iri na asatọ, ezinụlọ anyị kwagara Amerịka ka m nwee ike gaa akwụkwọ n’ezigbo mahadum. Mgbe ihe dị ka otu afọ gafere, nwanne mama m na di ya bịara Flọrịda ileta anyị. Ha bụ Ndịàmà Jehova. Ha kpọkwara anyị ka anyị soro ha gaa mgbakọ ha. Ná mgbakọ ahụ, otú ndị mụ na ha nọ si na-asape Baịbụl ha ma jiri akwụkwọ na-edetu ihe ha na-amụta masịrị m. Nke a mere ka m gwa ha ka e nyetụ m akwụkwọ na mkpịsị akwụkwọ, mụ ejiri ha na-ede ihe m na-amụta.
Mgbe e mechara mgbakọ ahụ, nwanne mama m na di ya gwara m na ebe ọ bụ na m chọrọ ịga mba ọzọ na-ekwusa ozi ọma, na ha ga-enyere m aka ka m mara Baịbụl nke ọma. Ihe a ha kwuru dị m mma n’ihi na n’oge ahụ, amachaghị m Baịbụl otú m ma akwụkwọ ndị Mọmọn.
Mgbe ọ bụla nwanne mama m na di ya ji fon na-akụziri m Baịbụl, ha na-agwa m ka m were ihe a na-akụziri m na chọọchị tụnyere ihe Baịbụl kwuru. Ha chọrọ ka m jiri aka m chọpụta nke bụ́ eziokwu.
E nwere ọtụtụ ihe a na-akụzi na chọọchị Mọmọn m kwetara na ha bụ eziokwu, ma amakwanụghị m ma hà si na Baịbụl ma ọ bụ na ha esighị. Nwanne mama m ahụ ziteere m Teta! (Bekee) nke November 8, 1995. * Otu isiokwu dị na Teta! ahụ kwuru banyere ihe ndị Mọmọn kweere. Mgbe m gụchara magazin ahụ, o juru m anya ịhụ na e nwere ọtụtụ ihe ndị Mọmọn na-akụzi m na-amaghị. Nke a mere ka m gaa n’ebe ndị Mọmọn na-edebe ihe n’Ịntanet ka m chọpụta ma ihe ahụ e dere na Teta! ahụ ọ̀ bụ eziokwu. Achọpụtara m na ọ bụ eziokwu. Ihe ọzọ mere m ji mata na ọ bụ eziokwu bụ ihe m hụrụ mgbe m gara n’obodo a na-akpọ Uta, bụ́ ebe ndị Mọmọn na-edebe ihe ochie ha.
M na-echebu na akwụkwọ ndị Mọmọn na Baịbụl na-ekwu otu ihe. Ma mgbe m malitere ịgụ Baịbụl nke ọma, achọpụtara m na e nwere ọtụtụ ihe ndị Mọmọn na-akụzi dị iche n’ihe Baịbụl kwuru. Dị ka ihe atụ, n’Ezikiel 18:4, Baịbụl kwuru na mkpụrụ obi na-anwụ anwụ. Ma n’akwụkwọ ndị Mọmọn, e kwuru n’Alma 42:9 na “mkpụrụ obi emekataghị nwụọ.”
Ihe wutere m abụghị naanị na ọtụtụ ihe ndị Mọmọn na-akụzi dị iche n’ihe Baịbụl kwuru. O wutekwara m na ihe ha na-akụzi na-eme ka ndị mmadụ chewe na e nwere mba ka ibe ya mma. Dị ka ihe atụ, ndị Mọmọn na-akụzi na ọ bụ na Jaksịn Kaụnti, nke dị na Mizuri, n’Amerịka, ka ogige Iden dịbu. Ndị isi chọọchị Mọmọn na-akụzikwa na mgbe Alaeze Chineke ga-abịa, na Chineke ga-eji ọchịchị mba Amerịka na-achị ụwa niile.
Ihe a ha na-akụzi mere ka m chewe ihe ga-emezi mba ndị ọzọ, dị ka Dọminikan Ripọblik bụ́ ebe a mụrụ m. M welitere okwu a n’otu mgbede mgbe otu nwa okorobịa onye Mọmọn kpọrọ m na fon. N’oge ahụ, a na-azụ nwa okorobịa ahụ ka ọ gaa kwusawa ozi ọma n’ala ọzọ. M jụrụ ya ma ọ̀ ga-alụso ndị Mọmọn ibe ya ọgụ ma ọ bụrụ na obodo ya na nke ndị Mọmọn ibe ya na-alụ agha. O juru m anya na ọ sịrị m na ya ga-alụso ha ọgụ. M mụsikwuru ihe ike ka m ghọta ihe chọọchị Mọmọn a m na-ekpe na-akụzi, m jụkwara ndị isi chọọchị Mọmọn ajụjụ. Ha gwara m na ajụjụ ndị ahụ m na-ajụ bụ ihe omimi, na a ga-emecha mata azịza ha otu ụbọchị.
Ihe a ha zara m ejughị m afọ. Ọ bụ mgbe ahụ ka m bịara chee echiche nke ọma ka m ghọta ihe mere m ji chọọ ka chọọchị Mọmọn ziga m ala ọzọ ka m kwusawa ozi ọma. M chọpụtara na ihe kpatara ya bụ na m chọrọ inyere ndị mmadụ aka. Ihe ọzọkwa bụ na m chọrọ ka a na-akwanyere m ùgwù otú e si akwanyere ndị e zigara ala ọzọ ka ha kwusawa ozi ọma. Ma, a bịakwanụ n’ịma onye Chineke bụ, achịtaghị m ájá. Ọ bụ ezie na mụ agụọla Baịbụl ọtụtụ ugboro n’oge gara aga, o nweghị ihe m ji ya kpọrọ. A maghị m ihe bụ́ uche Chineke maka ụwa ma ọ bụkwanụ ihe bụ́ uche ya maka ụmụ mmadụ.
Mgbe mụ na Ndịàmà Jehova mụwara Baịbụl, amụtara m ihe bụ́ aha Chineke, ihe na-eme mmadụ ma ọ nwụọ, ọrụ Jizọs na-arụ iji mezuo uche Chineke, na ihe ndị ọzọ. N’ikpeazụ, ihe Baịbụl na-akụzi malitere ido m anya. Ebidokwara m ịkọrọ ndị ọzọ ihe ndị m na-amụta na Baịbụl. Ịkọrọ ya ndị ọzọ na-atọkwa m ụtọ. Kemgbe ụwa m, ekwetara m na Chineke dị, ma m bịaziri weere ya ka ezigbo enyi m m na-akọrọ obi m n’ekpere. Emere m baptizim n’abalị iri na abụọ nke ọnwa Julaị n’afọ 2004, mụ aghọọ Onyeàmà Jehova. Mgbe ọnwa isii gafere, aghọrọ m Onye Kraịst nke na-ekwusa ozi ọma oge niile.
Arụrụ m ọrụ afọ ise n’isi ụlọ ọrụ Ndịàmà Jehova dị na Bruklin, Niu Yọk. Obi tọrọ m ụtọ na m nyere aka n’ibipụta Baịbụl na akwụkwọ ndị e ji amụ Baịbụl bụ́ ndị na-abara ọtụtụ nde mmadụ bi n’ebe dị iche iche n’ụwa uru. M ka na-enyekwara ndị mmadụ aka ka ha mụta banyere Chineke.
^ para. 12 Ọ bụ Ndịàmà Jehova na-ebipụta magazin a a na-akpọ Teta!
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ “Ha Chọrọ Ka M Jiri Aka M Chọpụta nke Bụ́ Eziokwu”
ISIOKWU TETA! A Ònye Bụ Mozis?
ISIOKWU TETA! A Mozis—Nwoke Nwere Okwukwe
ISIOKWU TETA! A Mozis—Nwoke Dị Umeala n’Obi
ISIOKWU TETA! A Mozis—Nwoke Hụrụ Ndị Ọzọ n’Anya
BỊARUO CHINEKE NSO ‘Ọ Bụ Chineke nke Ndị Dị Ndụ’
BAỊBỤL NA-AGBANWE NDỤ NDỊ MMADỤ “Ha Chọrọ Ka M Jiri Aka M Chọpụta nke Bụ́ Eziokwu”
IHE NDỊ NA-EME KA E NWEE OBI ỤTỌ N’EZINỤLỌ Gịnị Ka Ị Ga-eme Ma Ọ Bụrụ na Nwa Gị Nwere Nkwarụ?
Olee Akwụkwọ Bụ́ “Oziọma Judas”?
Ụdị Dị Iche Iche Họrọ ụdị nke ị ga-ewere ỤLỌ NCHE Gịnị Ka Anyị Na-amụta n’Aka Mozis?
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ ỤLỌ NCHE Gịnị Ka Anyị Na-amụta n’Aka Mozis?
Gịnị Ka Anyị Na-amụta n’Aka Mozis?
ỤLỌ NCHE Gịnị Ka Anyị Na-amụta n’Aka Mozis?